Ka fogeynta Dib-u-Beddelka Isticmaalka Kumbuyuutarka ee Kumbuyuutarka iyo PIN
Android Talooyin & Qalabyo
Kuwa haysta moobaylka ama kiniinada faraha faraha , farqiga awoodda aad ku gali kartid telefoonka adiga oo isticmaalaya taabasho sahlan ama fartaada fartaada ayaa ah wax sahlan oo cajiib ah. Mar labaad, waxay sidoo kale u sahlaan in la iloobo furahaaga sirta ah iyo lambarka PIN maadaama aadan u baahnayn in aad si joogto ah ugu soo celiso sida aad u isticmaashay.
Waa kormeer si aad u dhib badan haddii taleefankaaga ama kiniinadaadu si lama filaan ah ugu baahan yihiin lambarkaaga lambarkaaga lambarkaaga shaashadda oo ah sabab qaar. Haddii aad leedahay qalab Android ah, wali, ha quusan. Ilaa iyo inta uu ku xiran yahay koontada Google ee aad adigu leedahay - taas oo aad u wanaagsan tahay in la siiyo sida ay u tahay qayb ka mid ah qayb ka mid ah khibradda Android - waxaad awood u yeelan kartaa inaad PIN ama password kaaga fog adoo adeegsanaya shabakada webka ama barnaamijka gacanta Macallinka Android Device .
Waa kuwan tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaadato si aad u dejiso lambarkaaga PIN ama lambarka sirta ah si aad mar labaad u hesho telefoonkaaga ama kiniinigaada. Wixii qaraabo kuwaas oo laga yaabo inay telefoonkooda gacanta ku hayaan ama ay soo xaday, hubi inaad eegto waxbarashadayada ku saabsan Sida loo Toos Down Your Telefoonkii Lost . Hadda ka sii gudbi talaabooyinka loo baahan yahay si aad uga fogaato casrigaaga Android ama kiniiniga.
Fiiro gaar ah: Tilmaamaha hoos ku xusan waa in ay wax ka qabtaan cidda sameysay qalabkaaga Android: Samsung, Google, Huawei, Xiaomi, iwm.
Dib u soo celi qalabkaaga Android
Ugu horreyn, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in telefoonkaaga ama kiniinadaada la xiro. Eeg, Maamulaha Android Device wuxuu ubaahan yahay mid ka mid ah signal-ka ama mobile-ka Wi-Fi-ka oo ka soocaya aalad aad xiran tahay si aad ula xiriirto. Hadda, haddii aad is xakameyso inta ay ku jirto Airplane Mode, si fiican, ma hubo waxa laguu sheegayo.
Abaabul Maamulaha Android Device adoo adeegsanaya app qalab kale ama adoo ku qoraya "maamulaha qalab ee orroid" ee sanduuqa raadinta ee shabakadaada webkaaga iyo aadida goobta. Cinwaanka dhabta ahi waa https://www.google.com/android/devicemanager. Hubso inaad gashid koontada Google ee la xidhiidha qalabkaaga qarsoon.
Markaad ku jirto Maamulaha Aaladda Android, waxaad ku soo kici doontaa shaashad isku mid ah iyadoon loo eegin haddii aad ku socoto barta ama app. Shaashadan waxaa ku jira khariirad iyo sidoo kale sanduuq muujiya qalabka la xiriira koontadaada Google. Haddii aad haysato wax ka badan hal qalab oo la xidhiidha, kaliya fiiri midka qaaska ah ee xiran. Haddii aysan ahayn qalabkii ugu horreeyay oo la muujiyey, ku dhaji magaca qalabka shaashadda si aad u soo qaadato liiska dhamaan qalabka ku xiran xisaabtaada. Taabo midka saxda ah.
Iyadoo qalabka saxda ah ee la muujiyay, waxaad hadda haysataa fursado dhowr ah. Waxaad arki doontaa "Ring," "Lock," iyo "Erase." Wac ayaa loo adeegsadaa si aad u hesho taleefankaaga haddii aad meel ka dhacdey gurigaaga. Ereyga waxaa loogu talagalay telefoonnada aad ka lumisid guriga dibaddiisa oo aad doonaysid inaad sameysid dib-u-dhac farsamo si aad u hubiso in qof kastaa uu helayo ma heli karo waxyaabahaaga gaarka ah. Wixii qaraabo ah ee illowday keydkooda koodhka furaha, si kastaba ha ahaatee, ku dheji "Lock Lock" waa jidka loo tago. Tani waxay bilaabi doontaa shaashad kuu ogolaanaysa inaad bedesho shaashadda PIN-ka ee qalabkaaga. Ku qor PIN-kaaga cusub oo sug ilaa iyo inta aad ka heli karto si dhakhso ah oo sheegaya in Maamulaha Android ayaa soo diray macluumaadka ku saabsan isbedelka taleefankaaga.
Soo qaado shaashadda qalabka ah ee qalabkaaga xiran mar kale, hadda waxaad heli doontaa ikhtiyaarka aad ku geli karto pinkaaga cusub (marmarka qaarkood, waxay qaadan kartaa daqiiqad ama wax la mid ah). Gali pin iyo voila, qalabkaaga waa in hadda la furo.
Waxaa jiri doona waqtiyo aan caadi aheyn. Mararka qaarkood, waxaad heli kartaa fariin sheegaysa "Goobta aan la heli Karin" waxaadna u baahan doontaa inaad mar labaad baarto. Nidaamku sidoo kale ma shaqeyn karo haddii aad haysatid adeegyadda goobta aad ujogtay qalabkaaga ama aad ka dhigtay qarsoodi ah Google Play. Si loo hubiyo in si buuxda loola socdo Maamulaha Android Device mustaqbalka haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah, habka ugu sahlan waa inaad soo dejiso barnaamijka "Google Settings", ku dhufo "Amniga," kuna calaamadee calaamadaha jeegga si aad u fogeysid qalabka iyo u oggolaanshaha qalabka fog iyo tirtir.
Samsung Galaxy S5 Tips, Tricks iyo Tutorials
Tababarka: 15 Samsung Galaxy S7, Talooyinka S7 iyo Qalabka S7
Riwaayadda Android-ka ee Google
Maareynta Moto X Pure Edition Smartphone
Sida loo cusboonaysiiyo Your Android Android
Iska Ilaali Naftaada Iskuday Khasaaraha Sawirada Qalabka Lagu Hayo ee Android
Sida Loo Joojiyo Isticmaalka Xogta Mobile-ka
Qoraalka ugu fiican ee Microsoft Word Timesavers
Waa Maxay Sharger Shigare?
Sida loo isticmaalo Yahoo Messenger iyada oo aan lagu soo rogin App
5 Waxyaabaha Bilowdey Waxyaabaha Bilowga ah waxay u Baahan Yihiin in ay Ogaahaan Macluumaadka Macluumaadka
Dejinta iyo Isticmaalida Shabakadda WiFi ee martida ah
5G Tiknoolajiyada Wireless
Tilmaame-barashada bilowga ah ee PC-ga
Waa Maxay Heerka Dib u Celinta (HDMI ARC)
Sida loo Isticmaalayo App Store on Apple TV
Faragelinta Fidinta ee Fududeynta Awoodda Awoodda Guriga
Sidee baan u Abuuraa Passwordka ee Windows?
Sida loo kordhiyo Xaddiga Xaddiga Maqalka Maqalka
Qalabka Broadband ee shabakadda internetka ee xawaaraha sare
Integra waxay u soo baxaysaa Suuqa Suuqa Suuqda ee DLB-40.6
Barnaamijka ugu Wanaagsan, Wine, iyo Cocktail Apps for Android
Sida loo rakibo oo loo xakameeyo sanduuqa Albaabka loo isticmaalo Ubuntu